Kuuriyada Waqooyi oo qarxisay Xafiis kala dhaxeeyay Kuuriyada Koonfureed | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Kuuriyada Waqooyi oo qarxisay Xafiis kala dhaxeeyay Kuuriyada Koonfureed
Warbaahinta caalamka kuwooda ugu afka dheer ayaa qoraya war cusub oo ku saabsan in Dowlada Kuuriyada Waqooyi ay bur burisay xafiis kala dhaxeeyay Kuuriyada Koonfureed , xili xiisad u dhaxeesa labada dal uu dib usoo cusboonaaday.
Dowlada Kuuriyada Waqooyi bur burisay xafiiskan oo kuyaalay magaalada Kaesong oo kutaala xadka labada dal, xafiiskan ayaana ahaa mid ka dhaxeeyay oo labada dal kuwada shaqeenayeen.
Xafiiskan labada dal ka dhaxeeyay ayaa la furay sanadkii 2018-kii, waxaana xafiiskan loogu tala galay ka shaqeynta in xiriir isgaarsiineed yeeshaan labada dal ee Kuuriyada Waqooyi iyo mida Koonfureed.
Bur burinta xafiiska labada Kuuriya ka dhaxeesay ayaa kusoo aadeysa xili Dowlada Kuuriyada Waqooyi soo cusbooneesiisay hanjabaadyadii hore, iyagoona ugu goodiyay Kuuriyada Koonfureed in talaabo ka qaadi doonto.
Kuuriyada Waqooyi oo qarxisay Xafiis kala dhaxeeyay Kuuriyada Koonfureed was last modified: June 16th, 2020 by Admin
Weerar lagu qaaday saldhiga Ciidamada Jabuuti ku leeyihiin magaalada Baladweyne
Dhageyso:-Cabdulaahi sheekh Xasan oo ka jawaabay hadalkii ka soo baxay Madaxweyne Waare.